sanima life insurance(sanima life insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
sanima life insurance
कैलाश विकास बैंकले सानिमा लाइफको बिमा पोलिसी बिक्री गर्ने
काठमाण्डौ । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र कैलाश विकास बैंकबीच बिमा सेवा सम्झोता भएको छ । चैत १६ गते बैंकसँग सानिमा लाइफको बिमा सेवा सम्झौता भएको हो । एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीका तर्फबाट महाप्रबन्धक शिवराम तिमिल्सीना तथा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरन श्रेष्ठले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका...
बोनसको ग्यारेण्टीसहित सानिमाको ‘सानिमा जीवन श्री बिमा योजना’ लञ्च
-तुलसी पन्त काठमाण्डौ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ विशेषतासहितको ‘सानिमा जीवन श्री’ बिमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यो स्किमलाई आधुनिक स्तरको उत्कृष्ट जीवन बिमा योजना भनेको छ । यो योजनामा १६ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिले न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको जीवन बिमा गर्न सक्ने कम्पनीले आइतबार...
सानिमा लाइफले एकैपटक माग्यो १५२ कर्मचारी
काठमाण्डौ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले एकैपटक १५२ कर्मचारी मागेको छ। सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ वटा पदका लागि एकैपटक १५२ कर्मचारी मागेको हो । यो कम्पनीले ब्राञ्च म्यानेजरमा २७ कर्मचारी मागेको छ । बित्तीय संस्थामा २ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको र स्नातक उत्तीर्णयले ब्राञ्च म्यानेजरको पदमा आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ ।&n...
‘सानिमा लाइफः पाँच वर्षभित्र तेश्रो बन्ने, यही वर्षमा आइपीओ’
►केशवराज केसी नायब महाप्रबन्धक-सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सानिमा ग्रुप विशुद्ध नेपालीहरुको लगानी रहेको व्यवसायिक समूह हो। बीमा समितिले पछिल्लोपटक स्वीकृति दिएका ९ कम्पनीमध्येको एक, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको औपचारिक उद्घाटन २०७४ साल मंसिर २२ गतेका दिन भएको हो । पछिल्लो पटक स्वीकृति पाएका ९ नयाँ कम्पनीमध्ये व्यवसायिक...
उर्जामा केही हुँदैछ, विकासको बहार आउँदैछ !
ट्राफिक नियम मिचेर घर फर्किनुभयो ? जुनसुकै बेला प्रहरीको फोन आउनसक्छ !
काठमाण्डौमा वर्षकै उच्च तापक्रम
चलिरहेको केबलकार एक्कासी बन्द भो, प्रधानमन्त्री ओलीसहित ४० जना एकघण्टा अड्किए !
राष्ट्रबैंकको अनुमतिबिना बैंकका सीइओ नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदै
नेपाल बैंकको बजेट तर्जुमा गोष्ठी, एथिकल बाटोबाट उत्कृष्ट बैंक बनाउने प्रतिबद्धता